Fampakaram-bady tao Kana – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 janvier 18, 2013 Laisser un commentaire sur Fampakaram-bady tao Kana
« Ary tamin’ny andro fahatelo dia nisy fampakarambady tao Kana any Galilia; ary tao ny renin’i Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy koa ho ao amin’ny fampakaram-bady. Ary rehefa lany ny divay, dia hoy ny renin’i Jesosy taminy: Tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy: Ravehivavy, moa mifaninona akory Izaho sy hianao? Tsy mbola tonga ny fotoako. Fa hoy ny reniny tamin’ny mpanompo: ataovy izay asainy ataonareo. Ary nisy siny vato enina mahalany rano indroa na intelon’ny vata avy nipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaon’ny Jiosy. Dia hoy Jesosy taminy: Fenoy rano ny siny. Dia nofenoiny hatrany amin’ny molony. Ary hoy Jesosy taminy: tovozy amin’izao, ka ento amin’ny mpandahatra ny fanasana. Dia nentiny. Ary raha nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana, nefa tsy nahalala izay nihaviany (fa ny mpanompo izay nanovo ny rano no nahalala), dia niantso ny mpampakatra izy ka nanao hoe: Araka ny fanaon’ny olona dia ny divay tsara no arosony aloha; ary rehefa nisotro be ny olona, dia vao izay ratsiratsy kokoa; fa hianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny. Izany no nataon’i Jesosy tao Kana any Galilia ho voaloham-pamantarana, ka nasehony ny voninahiny; ary nino Azy ny mpianany ». Jaona 2: 1-11
Fahagagana voalohany nataon’i Jesosy izao eto amin’ity teksta ity izao. Ankoatr’izany anefa dia ahitantsika zavatra maro koa izao Teny eto izao.
– Efa lehibe Jesosy fa tsy zaza intsony, ary eto dia voalaza fa niaraka tamin’ny mpianany aza Izy. Voalaza fa tao ihany ny reniny , fa tsy tafaraka taminy Izy.
-Ny fanatrehan’i Jesosy izao fampakaram-bady izao sy ny nanaovany fahagagana ho an’izany dia fanambarana fa nankasitraka ny fampakaram-bady ny Tompo. Izao fankasitrahany fampakaram-bady izao dia fanamafisana fa Andriamanitra mihitsy no nanao ny olona ho lahy sy vavy, ary nanaovany an’i Eva (tokana) ho vadin’i Adama (tokana). Tsy vady marobe no nataon’Andriamanitra ho an’i Adama fa tokana. Lany ny divay tamin’izany fampakaram-bady izany ka toa ho afa-baraka ny tompon-panasana. Mba tsy ho tonga amin’ ny fahafam-baraka dia niangavy an’i Jesosy i Maria reniny toa hiangavy Aminy hitady vaha olana.
– Toa manambara sahady ny finoana ao amin’i Maria izao fanatonany ny Tompo izao, nino i Maria fa mety hahita vaha-olana i Jesosy. Raha mandinika ny valintenin’i Jesosy anefa dia toa valinteny an’avona no nasetriny izany: Ravehivavy, moa mifaninona akory Izaho sy hianao? Toa tsy ampoizina hoe hahavoaka teny toy izany amin’ny reniny niteraka Azy i Jesosy. Na dia toy izany aza ny valinteny azon’i Maria dia nino ihany izy ka hoy izy tamin’ny mpanompo: Ataovy izay asainy ataonareo. Nampirisika ny mpanompo i Maria hankato ny Tenin’ny Tompo!
– Ny fankatoavana: Ary nisy siny vato enina mahalany rano indroa na intelon’ny vata avy nipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaon’ny Jiosy. Dia hoy Jesosy taminy: Fenoy rano ny siny. Dia nofenoiny hatramin’ny molony. Raha ny zava-misy eto dia toa tsy nisy vahiny andrasana hisasa intsony fa efa eo amin’ny fanasana daholo ny nasaina, ary dia izao lany izao ny divay. Na dia izany aza, dia tsy nametraka fanontaniana intsony ireto mpanompo hoe fa maninona no fenoina rano indray ny siny. Nofenoiny rano ny siny. Nankato an’i Jesosy ireto mpanompo. Dia mbola nibaiko indray Jesosy: Tovozy amin’izao, ka ento amin’ny mpadahatra ny fanasana. Dia nentiny. Mbola mitohy ihany ny fankatoavana. Nentina ho any amin’ny mpadahatra ny fanasana izany. Tsy nametra-panontaniana indray izy ireo hoe, hatao inona ary ity rano ity hoentina any amin’ny mpandahatra ny fanasana ity. Raha dinihina eto dia fankatoavana anjambany ny Tompo no nataon’ireto mpanompo. Inona no vokatra azo: tsy vokatra ratsy, na vokatra mampiahiahy no azo, fa vokatra Tsara. Vaky vava ilay mpandahatra ny fanasana fa nitahiry ny divay tsara ny tompom-panasana na dia efa amin’ny farany aza. » Fa hianao kosa efa nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny » nahazo voninahitra indray ny tompom-panasana raha toa ka saika fahafam-baraka no azo.
Isika koa: raha misy zavatra ataontsika dia aza adino ny miangavy an’i Jesosy hanatrika izany, fa tsy ho matiantoka isika raha manasa ny Tompo hiaraka amintsika amin’izany zavatra ataontsika izany. Koa na inona na inona no zava-miseho rehefa asaintsika hanatrika eo ny Tompo dia Izy no miantoka antsika amin’ny zavatra rehetra. Aza mihevitra ny tenanao hahavita samirery izay ataonao fa aoka hiaraka amin’ny Tompo mandrakariva.
Aoka ho feno fankatoavana ny Tompo ny fiainantsika, na dia misy aza fizahan-toetra, dia mila maharitra amin’izany fankatoavana izany isika. Ka na dia zavatra toa mampisalasala ny saina aza no asain’ny Tompo atao dia aoka ho mpankato isika, fa ny vokany dia hiafara tahaka izao eto izao: nahazo vokatra TSARA, ka na dia fahafaham-baraka aza no niandry dia miara-mitafy ny voninahitry ny Tompo Jesosy isika.
Ny Tompo Jesosy anie hampahery antsika!
Publié parfilazantsaramada janvier 18, 2013 Publié dansUncategorized